Mpanamboatra sy mpamatsy rivotra mangatsiaka kokoa - China Industrial Air Cooler Factory
rafitra fampiroboroboana fantsona fantsom-panafody vaovao XK-25H
XK-25H rafitra fampiroboroboana fantsona vaovao avo lenta dia ny cooler indostrialy vaovao novolavolain'i XIKOO. misy miakatra, midina, mivoaka ny rivotra mba hapetraka mora amin'ny rindrina, tafo ary toerana hafa. Ity modely vaovao ity misy pad hampangatsiaka avo kokoa, ny etona sy ny vokatra mangatsiaka kokoa. A ...
vy tsy misy fangarony vy lehibe indostrialy ooler XK-30/35/45 / 50S
XK-30/35/45 / vy tsy misy fangarony goavam-be miasa amin'ny indostrialy vita amin'ny atrikasa lehibe. Miaraka amin'ny onjam-peo lehibe sy ny faneren'ny rivotra, ny halaviran'ny fandefasana rivotra dia mety ho 100-200meters. Natao ho mpitafy sentrifugal ho an'ny fehikibo miaraka amina akorandriaka vy matevina sy maharitra. Fisondrotana avo lenta ...